Kachasị High Pressure Flanged Gate valvụ Manufacturer na Factory | Kaibo
American Standard valvụ
Ọkọlọtọ Russian Valve
High Pressure Flanged Gate valvụ
Z541W High-pressure Power Station Gate Valve nke Kaibo Valve Group Co., Ltd. Ntuziaka, ụdị njikọ ịgbado ọkụ, otu nkwụnye ọkụ na-enweghị otu diski, oche nke na-ekpuchi ihe dị n'elu ala bụ simenti carbide, nrụgide ọnụ PN250 ~ PN320, valvụ ahụ ihe onwunwe bụ carbon ígwè elu okpomọkụ na elu nsogbu ike ojii n'ọnụ ụzọ ámá valvụ.
A na-ejikarị valvụ ọnụ ụzọ ámá dị elu, nke a makwaara dị ka valve ọdụ ụgbọ mmiri, na pipeline nke usoro dị iche iche nke ụlọ ọrụ ike ọkụ iji bipụ ma ọ bụ jikọọ usoro ọkpọkọ. Okwesiri iku ume: ndi n’etughi aru dika mmiri na uzuoku. E jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ na-emepụta valvụ, a na-eji valvụ ọdụ ọdụ dị elu nwere okpomọkụ dị elu na nrụgide dị elu, na usoro ntinye aka nke onwe ya. Nke dị elu karịa nrụgide ahụ, akara akara a pụrụ ịtụkwasị obi karị. N'ihi arụmọrụ na njirimara teknụzụ, ọnọdụ ọrụ pụrụ iche na-eme ka ngwaahịa ahụ bụrụ atụmatụ nke enweghị ngwaahịa ọzọ ga-anọchi ya.
1. Enweghị esemokwu mgbe mmeghe na mmechi. Ọrụ a na-edozi nsogbu ahụ kpamkpam na valvụ ọdịnala na-emetụta ala akara ahụ n'ihi esemokwu dị n'etiti oghere akara.
2. Ọdịdị dị n’elu. Enwere ike nyochaa ma rụzie valvụ ahụ na pipeline ozugbo, nke nwere ike belata nkwụsị nke ngwaọrụ ahụ ma belata ọnụahịa.
3. Single oche valvụ imewe. Iwepu nsogbu ahụ nke na-ajụ ase na oghere valvụ ahụ na-emetụta nrụgide na-adịghị mma ma na-emetụta nchekwa nke ojiji.
4. Low torque imewe. Enwere ike imeghe valvụ nwere nhazi ihe pụrụ iche ma mechie naanị obere aka.
5. Wedge akara Ọdịdị. A na-emechi valvụ ahụ site na ike ọrụ nke valvụ ahụ na-enye, na-agbanye mgbatị ahụ na oche valvụ ahụ, nke mere na nrụgide nke valvụ adịghị emetụta mgbanwe nke nrụgide pipeline, na arụmọrụ akara nwere ntụkwasị obi dị ukwuu n'okpuru ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
6. Ọdịdị nhicha nke onwe nke akara akara. Mgbe ọnụ ụzọ ámá ahụ na-agbadapụ site na oche valvụ, mmiri dị na pipeline na-agafe na ogo 360 n'otu akụkụ n'akụkụ oghere nke ọnụ ụzọ ámá ahụ, nke ọ bụghị nanị na-ewepu mbibi mpaghara nke oche valvụ site na mmiri ọsọ ọsọ, kamakwa ọ na-agba ọsọ wepu mkpokọta na akara akara iji mezuo nzube nke nhicha onwe.
Nzube na rụpụta Ihu Na Ihu Flange Dimension Pressure okpomọkụ Lating spection na Ule
Dị isi akụkụ ihe na ule Ule
Isi nkpuchi Disc Azuokokoosisi Akara Ihu Akara Shim Mbukota Okpomọkụ na-arụ ọrụ Adabara Ọkara
WCB 2Cr 13 13Cr
Naịlọn Enwekwu Mgbanwe Agbanwe
1Cr13 / Mgbanwe Graphite
08 Ezuru ohi
Enwekwu Mgbanwe Agbanwe
PTFE ≤425 Mmiri
C5 k12 .540
ZGCr5Mo .200 Mmiri nitric
MMA1605NKW2Mi 1Cr18Ni12Mo2Ti Acetic acid
Ọnọdụ Nkọwa 1.6 2,5 4.0 6.4 10.0 16.0
Nnwale Shell 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
Nnwale Ule Mmiri 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
Ule nyocha 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
Ule Ule ikuku 0.4-0.7
Akụkụ nke Flanged njedebe
1.6MPa nha DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
2.5MPa nha DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
4.0MPa nha DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
6.4MPa nha DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
10.0MPa nha DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
16.0MPa nha DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Nke gara aga: Ọdụdọ Ọdụdọ Ọdụ
Osote: API Bevel Gear Globe Valve
Ngabiga Check valvụ, Flanged nsọtụ
Ọdụdọ Ọdụdọ Ọdụ
Ball valvụ, Flanged nsọtụ
Ọnụ ụzọ ámá, Flanged nsọtụ
Globe Valve, Njedebe Flanged